Malunga nathi -Wuhan XYB Geophysical Exploration Equipment Co, Ltd.
I-Wuhan XYB Geophysical Exploration Equipment Co, Ltd.yabhaliswa kwaye yasekwa ngoMeyi 13, 2008. Ifunyenwe eWuhan e-China. Inkampani izimisele kwi-R & D, ukuvelisa kunye nokuthengisa izixhobo zokuhlola i-petroleum, ukubhola kunye nezixhobo zemveliso, kunye nezixhobo zokuhlola umhlaba. Isidlulisile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9000, isatifikethi senkqubo yolawulo lokusingqongileyo, isatifikethi senkqubo yolawulo lwempilo kunye nokhuseleko.
Iimveliso eziphambili ze-geophone yokuhlola inyikima ineesithandathu uthotho, ngaphezulu kwe-60 iindidi. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwi-petroleum, izimbiwa kunye nokuhlolwa komhlaba, indlela, ibhulorho, idama kunye nokwakhiwa kwetonela, ukungcangcazela okunzima koomatshini, ukubeka iliso kwinyikima njl.
I-XYB idibanisa italente kunye nobuchwephesha obuphezulu behlabathi, inabasebenzi abaqeqeshiweyo bamanye amazwe.
Iintlobo ezingaphezu kwama-60 zigunyazisiwe isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza, kubandakanywa amalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezulu kwama-20, ngaphezulu kwe-10 iindidi zempumelelo kwinqanaba lenzululwazi kunye netekhnoloji, nangaphezulu kwama-20 esizwe, ephondo nawomasipala amabhaso enzululwazi kunye neteknoloji. Isidlulisile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9000, isatifikethi senkqubo yolawulo lokusingqongileyo, isatifikethi senkqubo yolawulo lwempilo kunye nokhuseleko.
Imakethi yemveliso igubungele amasimi amakhulu eoyile yasekhaya kunye namasimi amalahle, kwaye zithunyelwa eYurophu, eMelika, eAfrika nakuMzantsi-mpuma Asia nakwamanye amazwe nakwimimandla engaphezu kwama-50. Isabelo sentengiso siphambili kwishishini elinye e-China. Ukusebenza kwemveliso esemgangathweni kunye negama elihle zixhomekeke kulwamkelo olukhulu kunye nendumiso.
Kwixesha elizayo, inkampani iya kuqhubeka "Ukuchaneka, ubungqongqo, ungqongqo” Uhlobo loshishino, kunye "ejolise kubasebenzisi, yenza elona xabiso liphezulu labasebenzisi” iinjongo zeshishini, ngobuchwephesha obuphambili, iimveliso ezikumgangatho ophezulu, ixabiso elifanelekileyo, kunye nabathengi bethu ukuhlangabezana nekamva eliqaqambileyo.